Askari katirsan ciidanka Puntland oo lagu dilay is rasaasayn ka dhacday gobolka Bari - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandAskari katirsan ciidanka Puntland oo lagu dilay is rasaasayn ka dhacday gobolka Bari
Ciidan katirsan Puntland oo lugeynaya gobolka Bari. [Xigashada Sawirka: AFP/Getty Images]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Askari katirsan ciidanka Puntland ayaa lagu dilay is rasaasayn ka dhacday deegaanka Ceel Daahir oo katirsan magaalada Carmo ee gobolka Bari, sida ay ku warantay idaacada Radio Daljir.
Is rasaasaynta ayaa timid markii dablay deegaanka ah ay xabad ku fureen gaari waday Qaad kaasoo kusii jeeday magaalo xeebeedka Boosaaso, sida ay ku warantay Daljir.
Askariga dhintay ayaa la dhihi jiray Dhago-weyne waxaana meydkiisa loo qaaday isbitaalka Boosaaso.
Ma ay jiraan wax hadal ah oo kasoo baxay dowadda haddii dablaydii is rasaasaynta ku lug lahayd la qabtay.
September 1, 2017 Ugu yaraan labo qof oo ku dhaawacmay weerar ay maleeshiyo aan haybtooda la aqoon ku qaadeen tuulada Bali Busle